HomeWararka CiyaarahaMadaxa Monaco oo Xaqiijiyay in Bartilmaameedka Liverpool iyo Real Madrid ee Aurelien Tchouameni uu tagi doono
Agaasimaha ciyaaraha ee Monaco Paul Mitchell ayaa xaqiijiyay in kooxda Ligue 1 ka dhisan ay diyaar u tahay inay iska iibiso Aurelien Tchouameni suuqa kala iibsiga ee xaggaagan.
Tchouameni ayaa wacdaro ka dhigay kooxo badan ka dib markii uu shan gool dhaliyay 50 kulan oo uu ciyaaray xilli ciyaareedkan isaga oo khadka dhexe ka ciyaara.
Liverpool iyo Real Madrid ayaa lagu soo waramayaa inay xiiso weyn u qabaan 22 jirkaan, waxaana hadda la siiyay fasax ay ku diyaariyaan dalabyada ka dib markii Mitchell uu xaqiijiyay in Monaco ay dooneyso inay iska iibiso Tchouameni.
Mar la weydiiyay inuu doorbidayo halka uu ku soo wajahan yahay xiddiga reer France Mitchell ayaa u sheegay RMC Sport “Ma lihi dookh aan daacad u ahaado! Sida had iyo jeer marka aad iibiso ciyaaryahan, waxaa loo baahan yahay magdhow cadaalad ah. .
“Qof walba wuxuu awooday inuu arko waxa uu yahay ciyaaryahan sare Aurelien, laakiin qof kastaa wuxuu sidoo kale ogyahay inaan nahay naadi hami leh. Markaa maya, wax door ah kama haysto marka ay timaado iibinta isaga, waa inaan noqon doonaa mid dagaal badan shuruudaha kharashka waxaan dalbaneynaa inaan lumino ciyaaryahan hibada u leh.”
Tchouameni ayaa qarka u saaran inuu ka tago kooxda ka dib markii uu dhaliyay sideed gool 95 kulan oo uu saftay tan iyo markii uu ka yimid maamulka 2020 ka Bordeaux.